Aasaaska Suuqgeynta Ecommerce ee 2020 | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Aasaaska Suuqgeynta Ecommerce ee 2020
Aasaaska Suuqgeynta Ecommerce ee 2020
Farsamooyin cusub iyo dabeecadaha macaamiisha ee kobcaya ayaa saameeya suuqgeynta ecommerce gunteeda.
Qaar ka mid ah isbeddelada ayaa saameeya xeeladaha la aasaasay, sida hagaajinta mashiinka raadinta. Kuwo kale, sida horumarinta iyo maaraynta chatbots, waa cusub. Dhammaantood waxay u baahan yihiin suuqgeeyayaasha ecommerce si ay u bartaan xirfado cusub oo muhiim ah.
Meesha SERP eber
SEO ayaa lagu doodi karaa inay tahay aasaaska ugu muhiimsan ee suuqgeynta ecommerce. Si fiican loo qabtay, SEO waxay saameyn xoog leh ku yeelan kartaa ganacsiga ecommerce muddo dheer. Laakiin SEO ayaa isbedelaya.
Sannadkii hore, Rand Fishkin, aasaasaha Moz iyo SparkToro, ayaa sheegay in 61.4 boqolkiiba weydiimaha mobilada Google ee la tijaabiyey Sebtembar 2018 aysan dhalinin gujis.
Qaar badan oo ka mid ah kiisaskan, Google ayaa si fudud uga jawaabay su'aasha lagu soo bandhigay su'aasha ee bogga natiijooyinka, wax gujin ah looma baahna.
Tusaale ahaan, haddii aad raadisay "waa maxay caasimadda Idaho," waxaad heli doontaa jawaabta adigoon wax dheeraad ah gujin. Waxaad helaysaa sawir, khariidad, iyo ereyga "Boise" oo ay la socdaan qaar ka mid ah waxyaabaha ka kooban "Idaho State Capitol" barta Wikipedia. Haddii aad gujiso, waxay u badan tahay inaad ku jiri lahayd kheyraadka lagu taliyey, kaasoo hadda ku jira booska eber.
Isticmaalayaasha Google waxay u badan tahay inay arkeen SERP oo ka jawaabaya su'aal, sida "waa maxay caasimadda Idaho."
Noocan ah jawaabta booska-eber waxay saameyn kartaa ecommerce iyo suuqgeynta nuxurka. Tusaale ahaan, haddii aad Google ka raadisay "sidaad hadiyad ugu qaadan lahayd awowgeyga," waxaad helaysaa qayb sifada ah, oo kuu soo jeedinaysa "in aad marka hore la hadasho hooyada iyo aabbaha" iyo "hubi in hadiyaddu ay ku habboon tahay da'da."
Markaa kuma filna inaad ku guulaysato booska SERP ee 2020. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad kasbato qaybo muuqda. Taasina waxay u baahan tahay hab cusub oo hagaajin ah.
Weydiinta sida "sida loo qaado hadiyad" waxay muhiim u noqon kartaa shirkadaha ecommerce. Laakiin SERP-kan, guushu waxay ku guulaysataa qayb ka mid ah qaybaha muuqda.
2020 iyo wixii ka dambeeya, wanaajinta booska eber maahan kaliya aasaaska SEO-ga cusub ee la xiriira. Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad hagaajiso weedhaha semantic, ma aha oo kaliya ereyada muhiimka ah iyo weedhaha dhaqanka.
Kor u kaca sirdoonka macmal iyo raadinta codka, Google, Bing, Yahoo, iyo Amazon ayaa la filayaa inay ka sii fogaadaan natiijooyinka qaamuuska ee dhanka semantiga.
Natiijooyinka qaamuuska ah waa halka makiinadda goobidda isku dayo in ay ku habboonaato weydiinta, kelmad ahaan kelmad. Natiijooyinka semantic, si kastaba ha ahaatee, waxay isku dayaan inay fahmaan macnaha weydiinta oo ay bixiyaan jawaabta ugu fiican iyada oo aan loo eegin erayada saxda ah ee la isticmaalo.
"Sannadkii 2010-kii, hagaajinta makiinadaha raadinta waxay la macno tahay in la soo koobo inta ugu badan ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah oo ay ku jiraan ereyo muhiim ah oo ka badan suxuunta dhinaca cashada Thanksgiving," ayuu Aleh Barysevich ku qoray maqaal 2018 Search Engine Journal.
"Waqtigaas ka dib, SEO waxay ka dhigan tahay fahamka sida makiinadaha raadinta u soo saaraan natiijooyinka si aan u bedeli karno nuxurka injineernimada ee darajada sare leh," Barysevich ayaa sii waday. "Maanta, fahamka mashiinka raadinta ayaa horumaray, waxaana bedelnay sida aan u wanaajino natiijada.
"Aqoonsiga ereyada muhiimka ah hadda kuma filna. Hadda, waxaad u baahan tahay inaad fahamto macnaha ereyada muhiimka ah, bixi macluumaad qani ah oo macnaha guud ka dhigaya ereyada muhiimka ah, oo aad si adag u fahanto ulajeedka isticmaalaha."
Ku iibinta Amazon
Ku iibinta suuqa Amazon (ama si toos ah uga iibinta Amazon) ayaa muhiim u ah ganacsiyo badan oo ecommerce ah.
Tani maaha wax la yaab leh. Sannadka 2019, boqolkiiba 32 macaamiisha Maraykanku waxay ka helaan ugu yaraan hal xidhmo Amazon kasta usbuuca, sida uu qabo Walker Sands' "Mustaqbalka Warbixinta Tafaariiqda 2019." Boqolkiiba xitaa waa ka sarreeyaa kun sano; Qiyaastii 43 boqolkiiba dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 35 waxay helaan hal ama ka badan sanduuqyada Amazon toddobaad kasta.
Dukaamadan waxay jecel yihiin Amazon. Isla warbixinta Walker Sands ayaa sheegtay in 45 boqolkiiba macaamiishu ay ku faraxsanaayeen kobaca Amazon ee warshadaha tafaariiqda sababtoo ah wax iibsiga ee Amazon ayaa ahaa mid aad u jaban oo ka sahlan.
Markaa wax la yaab leh maaha in kor u kaca boqolkiiba 66 dukaamaysatada Maraykanku ay bilaabaan raadinta badeecad cusub oo Amazon ah. Si kale u dhig, badi raadinta alaabta cusub ee Maraykanka waxay ka bilaabataa Amazon.
Sidaa darteed xitaa haddii ay rabto inay ka iibiso shabakadeeda oo ay rabto inay dhisto calaamad, ganacsigaagu wuxuu u badan yahay inuu u baahdo inuu ku qoro alaabta Amazon si uu uga caawiyo helitaanka iyo si loo helo helitaanka Amazon lacag-guji-riix. Samaynta tan waxay u baahan tahay xirfado suuqgeyneed oo cusub, oo ay ku jirto liis garaynta.
Fariinta (Chat) Bots
Fiidiyow dhowaan la soo saaray, Agaasimaha Cilmi-baarista Gartner Benjamin Bloom wuxuu yiri, "Aad ayaan u eegayaa suuq-geynta wada hadalka, taasina waa…isku-darka bots iyo khibradaha kale ee diirada lagu saaray wada-hadalka moobilka iyo codsiyada fariimaha bulshada."
"Mid ka mid ah waxyaalaha xiisaha leh ayaa ah sida ay shirkaduhu u bilaabeen inay qaataan qaar ka mid ah boosteejooyinka kala duwan…
"Waxa suuqgeynta wada hadalku u ogolaado summadaha inay sameeyaan waa inay qaataan waxyaabaha ay adagtahay in horay loo sii saadaaliyo, laakiin u fududahay macaamiisha inay ku caddeeyaan qoraalka oo ay taas u beddelaan wax is dhexgalka suuq-geynta qani ah."
Haddii Bloom iyo khubarada kale ay sax yihiin, suuqgeynta wada sheekeysiga iyo bots-ka fariinta la xiriirta waxay noqon doontaa mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee ganacsiyada ay ula xiriiraan macaamiisha.
Suuqgeeyayaasha e-ganacsiga, tani waxay uga dhigan tahay barashada sida loo isticmaalo oo loo shaqaaleysiiyo chatbots.
Old vs. Cusub?
Markaa taasi waa liiskayga xulashada aasaaska cusub ee suuqgeynta ecommerce. Laakiin xusuusnow, qaar badan oo ka mid ah aasaaskii hore ayaa weli lama huraan ah. Ha dayicin xayaysiis-ku-guji kasta oo Google ah, tusaale ahaan, adigoo door bidaaya chatbots-ka. Shirkaddaadu waxay u badan tahay inay u baahan tahay labadaba.
Sida Loo Abuuro Dakhliga Soo Noqnoqda ee Sanduuqa Is-diiwaangelinta ee WooCommerce
Sida loo isticmaalo iOS 13's cusub ee 'I xasuusi marka fariimaha la dirayo'